Haqaa fi Itoophiyaa: Maraammartoo 'Maa'ikalaawii' mootummoota sadanii - BBC News Afaan Oromoo
Haqaa fi Itoophiyaa: Maraammartoo 'Maa'ikalaawii' mootummoota sadanii
Mootummaan Itoophiyaa Qaammee 5 guyyaa Haqaa jechuun moggaasee kabajaa jira. Guyyaa kana ilaalchisuunis manni hidhaa namoonni keessatti dararamaa turan 'Maa'ikalaawii' jedhamee beekamu guyyoota afuriif daawwannaaf banaa ta'ee ture.
Bara mootii Hayilasillaasee banamee tajaajila akka eegale kan himamu manni hidhaa kun, bara mootummaa Dargii fi ADWUI maqaa adda addaan tajaajila kennaa ture.
Moggaasa 'Maa'ikalaawii' jedhamu kana kan argate bara mootummaa Dargii akka ta'e himama.
Bara mootummoota sadanuu gochi gara jabinaa adda addaa keessatti raawwatamaa kan ture, namoonni keessatti reebamaa fi dararamaa akka turan Pireezidantiin Itti Aanaa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Itoophiyaa Obbo Solomoon Araddaa BBC'tti himaniiru.
Manni hidhaa Maakalaawii ummataaf banaa ta'e
Yaaddannoo mana hidhaa Maa'ikalaawii ija hidhamtoota duraaniin
'Nama malee manni nama hin dararu' - Maa'ikalaawii
A.L.I bara 1990'moota keessa mootummaan ADWUI qondaalota mootummaa Dargii mana hidhaa 'Maa'ikalaawii' kana keessatti dararaa nama irraan gahaa turan himate murteen adda addaa itti murtaa'u himu Obbo Solomoon.
Keessaahu Ministira Dhimma Biyya Keessaa (Tika) kan turan Koloneel Tasfaayee Walda Sillaasee fi namoonni isaan jalatti ijaaraman yakka mirga dhala namaa sarbuu ykn 'crime against humanity' jedhuun himatamanii turani jedhu.
Yeroos Abbaa Seeraa walitti qabaa dhaddachaa ta'uun dhimmi kana ilaaluu isaanii kan himan Obbo Solomoon, waggoota afuriif Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa keessatti dhaddacha sana irratti hojjechuu dubbatu.
Abbaan Alangaa addatti hundaa'ee aanga'oota Dargii mana hidhaa kana keessatti hidhamtoota reebuu, dararuu fi ajjeesuun himatee ragaan waan irratti mirkaneesseef hidhaan waggaa 20 hanga du'aa itti murtaa'ee ture jedhu.
'Maa'ikalaawii' - eelaa yoomuu hin fayyine
"Mootummaan ADWUI namoota yeroos yakka dalagan jedhe seeratti dhiyeessee adabsiise, mana hidhaa sana osoo hin cufiin, jijjiirama tokko osoo hin fidiin, gocha suukanneessa warri duraanii hojjeta turan ofii raawwachuu itti fufe," jedhu.
Kuni hagam akka biyyaatti seenaa irraa barachuu akka hin dandeenye mul'isa jedhu Obbo Solomoon.
Akka seenaa irraa dhageenyetti mootummaan Hayilasillaasees haaluma kanaan itti fayyadamaa ture kan jedhan Obbo Solomoon, mootummaan Dargiis, ADWUI'nis akkuma kanaan itti fufe, maraammartoon kun iddoo tokkotti dhaabachuu qaba murtoo jedhuun manni hidhaa kun cufamuu dubbatu.
Mirga dhala namaa sarbuun itti gaafatamummaa akka namatti fidu hawaasnis mootummaanis akka hubatu cufamuun 'Maa'ikalaawii' ergaa ta'a jedhu.
Maa'ikalaawiin cufamuun qofti...
Finfinneetti 'Maa'ikalaawii'n haa cufamu malee kutaalee biyyattii adda addaa keessatti ammallee namni ajaja mana murtii malee hidhamee osoo seeratti hin dhiyaatiin tursiifamaa akka jiru, sarbamni mirga namoomaa adda addaas akka raawwatamu komiin ni dhagaahama.
'Maa'ikalaawii'n cufamuun matuma isaatti tarkaanfii guddaadha kan jedhan Obbo Solomoon, qaamni seera mirga dhala namaa akka kabaju, adeemsi seera haqa qabeessa ta'e akka jiraatu carraaqqii guddaa gochaa jirra jedhu.
"Gama poolisiitiin gama qaama nageenyaa kamiinuu gochi nama reebuu fi dararuu akka hin dalagamne, namootni shakkamanii abbootii seeraa duratti dhiyaatanii mirgi isaanii akka eegamu manni murtii cimsee akka to'atu waliigalleerra," jedhu.
Kanaan dura shakkamtoonni poolisiin na reebe, na darare yakka narratti raawwate jedhanii yoo himatan abbootiin seeraa fi manni murtii akka hin agarree fi hin dhageenyetti bira darbaa ture jedhu Obbo Solomoon.
Sun dogoggora akka ta'eefi, wanti akkasii yoo raawwatamu tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu sirreeffama gochaa jirra jedhu.
Wanti hundaa al tokkotti jijjiiruun ni ulfaata kan jedhan Obbo Solomoon, qaama seeraa hundi akka jijjiiramu gochuun hojii yeroo barbaadudha jedhu.
Haa ta'u malee gama mootummaanis, gama qaama seeraanis ta'e gama mana murtiin kallattiin kaa'ame heerri mootummaa fi olaantummaan seeraa akka kabajamuufi mootummaa dabalatee namni hunduu seeran bitamuu akka qabu ta'uu dubbatu.
"Qaamni mootummaa aangoon harka jiru, waan fedhe raawwachuu kan danda'u, kan gaafatamuun hin jirre itti fakkaatu ni jiraata. Kana yeroo gabaabaa keessatti sirreessuun ni ulfaata," jedhu.
Barsiisaa mana hidhaatti arrabni hidhamee, miilaa fi harkisaanii hojii dhaabe
Ce'umsarra waan jirruuf qaamni seeraa nama baay'inaan qabee hidhuu danda'a, mirgi namaa sarbuunis jiraachuu danda'a kan jedhan Obbo Solomoon, "garaagarummaan amma jiru, namni tokko abbaa seeraatti yoo iyyate akka cal jedhame bira hin darbamne," gochuudha jedhan.
"Namoonni yoo to'annoo seeraa jala oolan mirgi isaanii akka hin cabne, mirgi heera mootummaan kennameef akka hin sarbamne kutannoo jabaa qabna," jedhu.
"Keessaahuu nama reebanii dararuu ykn 'torture' irratti himanni yoo mana murtiif dhiyaate, seeraan tarkaanfii fudhachuuf duubatti hin deebinu," jedhan.
Haqa warra dararamanii…
Namoonni bara mootummaa Dargii mana hidhaa 'Maa'ikalaawii' keessatti hidhamtoota dararaa turan adabamanii kanneen dararamaa turan haqa argataniiru jedhu Obbo Solomoon.
Har'as kanneen bara mootummaa ADWUI nama dararaa turan himatamanii dhimmi isaanii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti ilaalamaa akka jiru dubbatu.
Dabalataanis lammiin ani dararameera jedhu kamuu, namoota miidhaa irraan geesisan addaan baafatee kan beeku yoo ta'e raga qabatee himata dhiyeeffachuu danda'a jedhu aanga'aan kun.
Hidhamtoota qoricha furmaata yeroon wallaanaman
Manni murtii waliigalaa fooyya'iinsa seerotaa fi dambiiwwan adda addaa sirna haqaatti gufuu ta'uu danda'an fooyyessaa jira jedhu Obbo Solomoon.
Bilisummaa abbootii seeraa mirkaneessuu, dambiiwwan adda addaa baasuu, abbootii seeraaf leenjii kennuufi hojiilee adda addaa hojjechaa jiraachuu himu.
Haa ta'u malee amala xaxamaa manni murtii qaburraa kan ka'e jijjiiram mul'atu yeroo gabaabaa keessatti fiduun rakkisaa ta'uu, garuu ammoo hojilee gurguddoo hojjetaa akka jiraniifi jijjiirama akka fidan abdii akka qaban Obbo Solomoon himaniiru.
Yaaddannoo mana hidhaa Maa'ikalaawii: hidhamtoonni duraa maal himu laata?
12 Ebla 2018
Qanaasaa Raggaasaa: Barsiisaa reebichaan miilaa fi harkisaanii sochii dhaabe
4 Fuulbaana 2018
Manneen hidhaafi fayyaa: Hidhamtoota qoricha furmaata yeroon wallaanaman
13 Ebla 2018
Sudaan daangaa kiyya weerartee, dabalataaf dhaadatti jette Itoophiyaan
Daqiiqaa 45 dura
'Qanafni kabajaafi gaachana dubartiiti'
Waa'ee misaa'ela, niwukilaraa fi waraana Kooriyaa Kaabaa hagam beekna?
Daqiiqaa 53 dura
Seenaa Jireenyaa Duukii Edinbiraa, ilma mootii Fiilip
Seerri 'wal-dhabde hiikuu' Itoophiyaa waggoota 65 booda fooyyaa'e maali?
Itoophiyaan ejjennoo Masiriifi Sudaan Hidha Haaromsaa irratti qaban qeeqxe
Ministira fayyaa 'dadhabeera' jechuun aangoo gadhiisan
Itoophiyaan waggaatti boba'aa hangam fayyadamti?
Magaalaan seena-qabeessi umurii 3,000 qabu argame
Tamiriin maaliif Ramadaana keessa filatamaa ta'e?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 8 Caamsaa 2019
Biyyoonni talaallii Joonsan & Joonsan kennuu adda kutan